डिसेम्बर 30, 2016 डिसेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments भाग्यमानी मानिस
भाग्यमानी मानिससँग हुने ६ कुराहरु ! भाग्य भएपछि चाल्नुमा दुध दुहुँदा पनि अडिन्छ, तालुमा आलु फल्छ भनिन्छ । शायद कोही कोही भाग्यमानीको जिवनमा पनि यस्ता उखान चरितार्थ हुन्छन् । सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख श्लोक यस प्रकार छ ।
जीवनमा सदैव सुखी रहनको लागि शरीर स्वस्थ हुनु जरुरी छ । यदी शरीरमा कुनै रोग छ भने तपाई राम्रो सँग कुनै पनि काम गर्न सक्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा तपाईं जीवनका हरेक कुराबाट बञ्चित हुनुहुन्छ । यदी तपाईंमा साना साना रोगहरु छन् भने पनि तपाईं कुनै काम राम्ररी गर्न सक्नु हुन्न । श्रम नगरी खान पाईंदैन । श्रम गर्नका लागि शरीर स्वस्थ्य हुनु पयो । स्वस्थ्य शरीर नै एकप्रकारले सुखी जीवन हो इश्वरको बरदान हो ।
सुन्दर त्यस पछि पनि मीठो बोल्ने श्रीमती पाउनु भनेको सुनमा सुगन्ध हो । त्यो पनि अर्को सुख हो । जसले नम्रतापूर्वक कुरा गरेर परिवारकाहरु सदस्यलाई सुख राख्न सक्छिन् । यदी नमीठो बोल्ने श्रीमती घरमा छन भने दिनहू घरमा विवाद भईरहन्छ र घरको वातावरण अशान्त हुन्छ । यसप्रकार कर्कशा श्रीमती हुनेको घरमा न परिवारले सुख पाउँछ न इष्टमित्र आउँछन् न छर छिमेकी । न उनीहरुको सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
५. आज्ञाकारी पुत्र
६. धन पैदा गर्ने विद्या
पैसा त आउँछ जान्छ यो एक नियम नै हो । कयौं पटक यस्तो पनि देखिएको छ कि कोही व्यक्ति कुनै दिन धनवान हुन्छ त केही दिनमै पैसा को लागि तड्पि रहेको हुन्छ । कोही मानिस आप्mनो भएको पैतृक सम्पत्ति अनियन्त्रित रुपले खर्च गर्छन । यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाई सँग यस्तो ज्ञान हुनु प¥यो जसले भएको धन नष्ट पनि नहोस् र काम पनि बनोस् । यदि तपाईंसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाई त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नु हुन्छ । सम्मानपूर्वक जिवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ ।
← आइतबारदेखि नेपाल टेलिकमको फोर-जी सेवा सुरु
आफ्नो भाग्य रेखा आफै हेर्नुहोस →
4 thoughts on “भाग्यमानी मानिससँग हुने ६ कुराहरु”
Pingback:ज्योतिषशास्त्र अनुसार शरीरको यी ६ अंगहरु ठूला हुने महिलाहरु हुन्छन् भाग्यमानी
Pingback:भाग्यमानी युवतीका १२ लक्षणहरु
Pingback:थाहा पाउनुहोस् यस्ता जीवनसाथी भएका मान्छे हुन्छन भाग्यमानी
Pingback:मान्छेको चिउँडोबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ को कति भाग्यमानी भनेर ?